Barnaamijka Tubaakada Ganacsiga ee Hindida Mareykanka - 802Quits
Bogga ugu weyn » Vermonters » Waxaan rabaa inaan joojiyo » Hindida Mareykanka
CAAWIMAAD TABBUXO Ganacsi oo bilaash ah
Isticmaalka tubaakada ee dhaqanka Hindida Mareykanka ayaa aad uga duwan isticmaalka ay dhiirrigeliyaan soo saarayaasha tubaakada ganacsiga. Boqolkiiba tiro aan dheellitirneyn oo Hindida Mareykanka ah ayaa isticmaala tubaakada ganacsiga marka loo eego kooxaha kale ee Mareykanka. Shirkadaha tubaakada ganacsiga waxay bartilmaameedsadeen Hindida Mareykanka suuqgaynta, maalgalinta munaasabadaha iyo wax bixinta, iyagoo hindisay istiraatiijiyado dhiirrigelin ah iyo ku takrifal sawirro iyo fikrado ka yimid dhaqanka Hindida Mareykanka.
Sida walxaha kale ee balwada leh, haddii tubaakada la xumeeyo ama loo isticmaalo madadaalo, waa waxyeello. Hindida Mareykanka ee ku dhaqma isticmaalka tubaakada dhaqameed waxay fahmeen tan waxayna xaddidayaan isticmaalkeeda ujeeddooyin munaasab ah oo keliya. Sheekooyinka sababta tubaakada loogu siiyo Dadka Asaliga ah ee Mareykanka si loogu tukado ayaa la soo dhiibayay kumanaan sano. Isticmaalka tubaakada dhaqameed waxay gacan ka geysaneysaa abuuritaanka isku xirnaanshaha jiilalka fog fog waxayna taageertaa nolol wanaagsan iyo bulsho caafimaad qabta maanta iyo mustaqbalka.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku tubaakada dhaqanka iyo isticmaalkeeda
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku tubaakada ganacsiga
BARNAAMIJKA GANACSATADA SHARCIYADA SHARCIGA EE MAREYKANKA
Joojinta tubaakada ganacsiga way adkaan kartaa, laakiin caawimaad ayaa la heli karaa. Isqorista Barnaamijka Tubaakada Ganacsiga ee Hindida Mareykanka ah si aad u hesho lacag la'aan, caawimaad dhaqan ahaan-loogu talagalay joojinta tubaakada, oo ay ku jiraan:
10 wicitaanada tababarenimo oo lala yeesho tababarayaal u dhashay dalka
Ilaa 8 usbuuc oo balastar bilaash ah, xanjo ama lozenges
Diirad saarida isticmaalka tubaakada ganacsiga, oo ay kujiraan tubaakada aan qiiqa lahayn
Caawinta joojinta loogu talagalay waxay u furan tahay dhammaan dadka asaliga ah ee reer Vermont, oo ay ku jiraan dhalinyarada ka yar 18 sano
Tubaakada Tubaakada Ganacsiga ee Hindida Mareykanka waxaa lagu soo saaray iyada oo ay ka soo jawaab celinayaan xubnaha qabaa'ilka ee ku kala baahsan dhowr gobol.
Qisadii Hooyadi Corn
Wac bilaash 1-855-372-0037 si toos ah loola xiriiro tababarayaasha Barnaamijka Tubaakada Ganacsiga ee Hindida Mareykanka.
3 tababarayaal ayaa wicitaanada Isniinta-Jimcaha, 8:30 subaxnimo - 9 galabnimo EST.
Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa tababarayaasha Barnaamijka Tubaakada Ganacsiga ee Hindida Mareykanka adoo wacaya 1-800-QUIT-HADA.
Booqo Barnaamijka Tubaakada Ganacsiga ee Hindida Mareykanka website.
Isku qor internetka.
Soo gal kheyraad dheeri ah oo ay kujiraan looxyada fariimaha, agabyada waxbarasho, qorshaynta joojinta qorshaynta barnaamijka iyo joojinta raadraaca horumarka.
Si aad wax badan uga barato tubaakada iyo dhaqanka oo aad u hesho ilo badan, booqo Ka dhig Xurmaysan: Shabakadda Dhaladka Qaranka .